निर्वाचन आयोगलाई ओली समूहको पत्रः नेकपा फुटेको छैन ! « MNTVONLINE.COM
निर्वाचन आयोगलाई ओली समूहको पत्रः नेकपा फुटेको छैन !
काठमाडौँ । नेकपा ओली पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा लिखित पत्र बुझाएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी विभाजन भएको जसरी पत्र पठाएको भए पनि पार्टी विभाजन भने नभएको ओली समुहको पत्रमा उल्ल्लेख छ । उक्त पत्रमा ओली पहिलो अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड द्वितीय अध्यक्ष रहेको र माधकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता भएको बताइएको छ ।
ओलीले ११ पृष्ठ लामो जवाफ पठाउँदै भनेका छन्, ‘पुष्पकमल दाहाल समेतले आयोगमा पत्र पठाई पार्टी विभाजनको हिसावले पत्राचार गरेपनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएको छैन र, होइन ।’
ओली पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा लिखित पत्र